A: obi 1. Press press: tumadi na -eme ọkpụrụkpụ pectoralis isi akwara na uzo obi. Omume: dinara na bench gị jiri dumbbells n'aka abụọ, jiri dumbbells n'ubu gị, ọbụ aka na -eche ihu, bulie dumbbells ahụ ruo mgbe ogwe aka gị kwụ ọtọ, kwụsịtụ, jiri nwayọ laghachi na po ...GỤKWUO »
Ikekwe maka ibi ndụ dị mma, ma ọ bụ iji mee ka ahịrị ahụ sie ike, ọtụtụ mmadụ hụrụ ahụike n'anya, n'ihi nke a, ụfọdụ ụmụ akwụkwọ bidoro na APP omenala ọ bụla, akwụkwọ nkuzi a adaghị, kpọọ nkà nka zuru oke, mana ị ga -ekwu, omume bụ naanị ihe njiri mara ...GỤKWUO »
Nchebe Otu n'ime ihe izizi ga -abụ nchekwa. Ọ dị mma na ị nwere akụrụngwa n'ụlọ? Kedu ka ahụike gị dị? Ị nwere ụmụaka? Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ahụike, lelee dọkịta gị wee hụ na iwebata mmemme ọzụzụ ọhụrụ dị mma maka gị. Ụfọdụ akụrụngwa bụ su ...GỤKWUO »